mpitsoa-ponenana - ALinks
Lahatsoratra momba ny mpitsoa-ponenana
Ahoana ny fomba fangatahana fialokalofana any Aotrisy?
March 29, 2022 Demi Aotrisy, mpitsoa-ponenana
Afaka mangataka fialokalofana any Aotrisy ianao raha mahatsapa ho tsy azo antoka ao amin'ny firenenao. Ary raha tsy mahavita miaro anao koa ny firenenao. Mila manatrika mivantana any Aotrisy ianao. Afaka mangataka fialokalofana manokana ianao
Ahoana ny fomba hahazoana fialokalofana any Irlandy? Mpitsoa-ponenana any Irlandy
March 28, 2022 Shubham Sharma Irlandy, mpitsoa-ponenana
Afaka mahazo fialokalofana any Irlandy ianao raha any Irlandy. Afaka manomboka mitaky fialokalofana any Irlandy amin'ny fomba roa ianao. Afaka mitsidika ny fanaraha-maso pasipaoro ianao raha vao tonga any Irlandy. Na afaka mandeha mivantana ianao
Ahoana ny fomba fangatahana fialokalofana any Belize
March 10, 2022 Shubham Sharma fialokalofana, mpitsoa-ponenana, Travel
Belize dia firenena any Amerika Afovoany ao amin'ny Ranomasina Karaiba. Ny velarantanin'ilay firenena dia 22,970 km² (8,869 mi²) ary ny morontsiraka manontolo dia 386 km (239.8 mi). Ity velaran-tany ity dia manodidina ny 91% amin'ny velaran'ny
Ahoana ny fomba hahazoana fialokalofana any Alzeria?
Febroary 28, 2022 Shubham Sharma Alzeria, fialokalofana, mpitsoa-ponenana
Fangatahana fialokalofana any Alzeria Ny biraon'ny UNHCR any Alzeria ihany no manaiky sy manoratra fangatahana fialokalofana. Afaka mifandray amin'izy ireo amin'ny +213 (0) 23 05 28 53 ny alahady ka hatramin'ny alakamisy, h. 09:00-12:30-14:00-16.30, ho fampahalalana momba ny fisoratana anarana. Azonao atao koa
Ahoana ny fomba fangatahana fialokalofana any El Salvador?
Febroary 18, 2022 Demi El Salvador, mpitsoa-ponenana
Etazonia, Meksika ary Espaina no toerana nalaza indrindra. Manodidina ny 70% amin'ny fangatahana fialokalofana no nolavina. Ny mpitsoa-ponenana tany Alemaina sy Panama no nahazo fahombiazana indrindra. Tamin'ny 2020, olona 14,999 no nandositra an'i El Salvador ary nanao fangatahana
Ahoana ny fomba hahazoana fialokalofana any Burkina Faso?
Janoary 30, 2022 Demi Borkina Faso, mpitsoa-ponenana
Afaka mitady fialokalofana any Burkina Faso ianao raha vao miditra ao amin'ny firenena amin'ny fangatahana amin'ny manampahefana eo an-toerana na any amin'ny biraon'ny UNHCR. Burkina Faso dia nanao sonia ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana 1951 mifandraika amin'ny satan'ny